Puntland oo heshiis la kala saxiixdey | BBC Somali
Axad, 18.05.2003 - 19:37 Wakhtiga London
Puntland oo heshiis la kala saxiixdey
Col. Cabdullaahi Yusuf oo saxiixaya heshiiska
Axmed Kismaayo - Boosaaso
Xaflad lagu soo gabagabaynayo wadahadalkii nabadeed ee waayadan ka socday magaalada Bosaso una dhexeeyay maamulka haatan ka taliya Puntland iyo Golaha Badbaada Puntland ayaa galabta lagu qabtay fagaare ku yaal xarunta madaxtooyada ee magaalada Bosaso taasoo si rasmi ah loogu saxiixay heshiis kama dambays ah.
Xafladdan oo si wayn looga soo qaybgalay ammaankeedana aad loo sugay ayaa markii ugu horraysay waxa indhaha lagu dhuftay madaxwaynaha Puntland Cabdullahi Yusuf Axmed iyo Jeneral Cadde Muse oo meel fagaare ah is garab fadhiya.
Gen. Cadde Muuse oo saxiixaya heshiiska
Labada nin waxay galabta ay qalinka ku duugeen heshiis kama dabmays ah, kaasoo looga gol-leeyahay in lagu soo afjaro guud ahaanba qalalaasihii siyaasadeed ee waayadanba ka jiray degaannada Puntland.
Kulankii galabta ayaa saxiixa heshiiska ka dib waxa Cabdullahi Yusuf iyo Jeneral Cadde labadaba ay ballan qaadeen inay ka dhabaynayaan hirgalinta heshiiskan sida ugu dhaqsaha badan.
Heshiiskan oo in muddo ahba lagu mashquulsanaa muran badanna ka dhex abuuray labada geesood ayaa waxa ka muuqda wax-qaybsi xagga awoodda iyo maamulkaba ah kaasoo sida muuqata labada dhanba ay isla oggolaadeen.
Waxa uu dhigayaa heshiiskan in Golaha uu madaxda ka ahaa Jeneral Cadde ay ku yeelanayaan xukuummada Puntland 3-xubnood oo ka mid ah golaha wasiirrada iyo laba wasiir k/xigeen,iyo weliba laba agaasime guud iyo 3-agaasime waaxeed.
Jagooyinka kale ee muhimka ah ee la siiyay Golihii Badbaada Puntland waxa ka mid ah, mid ka mid ah labada taliye ee ciidamada daraawiishta iyo kan boliiska, maamulka Dekedda iyo Garoonka midkood,iyo ugu yaraan laba gudoomiye gobol oo ay wehliyaan laba gudoomiye degmo.
Waxa kaloo heshiiskani dhigayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland uu ka iman doono gobolka Bari, taasoo u muuqata in la siin doono xubin ka tirsan golaha Badbaadada kana soo jeeda gobolka Bari.
Ciidamada Gen Cadde
Golaha uu hoggaamiyo Jeneral Cadde waxay ay xubno ku yeelan doonaan Ergada Puntland ee ka qaybgalaysa shirka nabadaynta somalida ee ka socda dalkaasi Kenya sida ka muuqata heshiiskan.
Dhinaca kalana ciidamada Jeneral Cadde ayaa waxa loo qaybin doonaa ciidamada daraawiista iyo Boliiska ee DGPL,waxana saxiixa heshiiskani uu soo afjarayaa jiritaanka Golaha Badbaadinta Puntland sida ku cad heshiiskan.
Boqor Cusmaan Maxamuud iyo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam oo ah Labada Isim ee sida aadka ah uga qaybqaatay heshiiskan ayaa waxay u soo jeediyeen dadka ku nool Puntland inay dhowraan heshiiskan isla markaana ay ka faa'idaystaan fursaddan.
Labada Isim waxay ka warameen hawlihii faraha badnaa ee laga soo maray heshiiskan waxayna sheegeen inay u mareen heshiiskan hannan ku dhisan dhaqanka somalida iyagoo ugu baaqay ummadda Soomaliyeedna inay ka shidaal qaataan heshiiskan.
Saxiixii heshiiskan ka dib ayaa waxa halkaas isku gacan qaaday madaxwaynaha Puntland Cabdullahi Yusuf iyo General Cadde Muse iyagoo isku soo booday isla markaana xabadka isa saaray taasoo dadkii munaasabbadda joogayna ay sacab ku bogaadiyeen.
Heshiiskan ayaa lagu wadaa inuu soo gabagabeeyo colaadii socotay, laga soo billaabo 5-tii ogost sannadkii 2001- oo ahayd markii dagaalkii ugu horreeyey uu ka qarxay magaalada Bosaso taasoo ay xigeen dagaallo kale oo dhowr ah oo ay isaga horyimaadeen labada dhinac.